सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन्।
मङ्लबार, अशोज १२, २०७८ ९:३१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन्। आफैले दुई पटक विघटन गरेको संसदमा आउन उनीहरुलाई नैतिक हैसियत नभएको उनको टिप्पणी थियो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा। भट्टराईले भने, २ चोटी विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने हो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले अलिकति पनि नैतिकता भए एमालेका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध पारेर नबसी राजीनामा गरेर जनताबीचमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दैनौ भन्ने एमालेले संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु सरमको विषय भएको पनि दोहोर्‍याए।
‘जसले संसदलाई २(२ चोटी विघटन गर्छ। ती मान्छेहरुले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने ? उनले सोधे, सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौ भन्ने अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने ? अनि संसदीय मर्यादा कायम। जुन संसदलाई विघटन गरिसक्यो, उसले त्यो संसदमा आउन त लाज हुनुपर्ने हो।
आफूले पार्टी छोडिसकेपछि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको उनले स्मरण गराए। उहाँहरुमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने राजीनामा गरेर जनताबीच जानुपर्छ उनले भने।